गर्भमै बलात्कृत कस्तुरी | Ratopati
गर्भमै बलात्कृत कस्तुरी
personब्लग exploreकाठमाडौं access_timeसाउन १, २०७७ chat_bubble_outline0
जननी धर्ती धीरताको खानी ममतामयी भनेर सदा चर्चा पाएको शब्द हो आमा । अनि कुनै ठाउँमा सुरक्षित हुन नसकेको प्राणी पनि यिनै आमा हुन् । जिन्दगी जिउने सिलसिलामा परिआएका अप्ठ्यारा बाधा अनि चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा धेरैको मुखमा आउने शब्द पनि आमा हो । तपाईंको घरमा पक्कै पनि छोरी छन्, यदि छोरी छैनन् भने दिदीबहिनी छन् । ती पनि छैनन् भने बुहारी, अनि तपाईंकै पत्नी त अवश्य छन् ।
यी सबै अवतारहरू नारीरूपी आमाकै हुन् । पुरुषले बलात्कारको घडी बिर्सन्छ, बलात्कृत नारी पनि कसैकी आमा हुन्, हरेक पुरुषको जन्म नारीबाट हुन्छ तर किन बिर्सन्छ पुरुष बलात्कृत नारी पनि कसैकी छोरी हुन्, बुहारी अनि आमा हुन् भनी । नेपाली चेलीहरू सुरक्षित रहन सक्ने ठाउँ कुन होला ? कहिले बन्धक बनाएर बलात्कार, कहिले गिरोहद्वारा सामूहिक बलात्कार, कहिले जाहेरी दिन जाँदा उल्टै प्रहरीबाट, न त छोरी बचेका छन् न त दिदीबहिनी । यस्तो दुःखद् परिस्थितिको अन्त्य कहिले, कसरी, कसले गर्ला ? शिवसँग पार्वती, रामसँग सीता, कृष्णसँग राधा जोडिएका हुन्छन् किनकि एकबिना अर्को अधुरो र अपूरो मानिन्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषको साथ चाहिन्छ यो सत्य कुरा हो । तर कसैले कसैको शरीरलाई खेलौना बनाई मिल्काउनु जघन्य अपराध हो ।
बाबा हजुरले हिजो बेलुका मलाई सुनाउनुभएको कविता अझै सकिएको छैन । आज सुनाउनु न... छोरीले सुत्ने बेलमा जिद्दी गर्न थाल्छे आफ्नो प्यारो बाबासँग । पेसाले कस्तुरीका पिता शिक्षक थिए । दिनभरीको विद्यालयको काम काजले थाकेका बाबाले आफ्नी फूलजस्ती कोमल मृगनयनी अनि अनमोल मायाले कुँदिएकी छोरी कस्तुरीलाई सदा महाभारतको कथा सुनाउँथे ।
भगवान श्रीकृष्ण र सुदामा अत्यन्त मिल्ने मित्र थिए । एक दिन उनीहरू जङ्गलमा खेलिरहेका थिए । कृष्ण भगवानकी आमाले खाजा खान भनी एउटा पोको दिनुभयो र भन्नुभयो बाब भोक लागेपछि खाजा दुवैले बराबर बाँडेर खानू । केही समयपछि पानी पर्न थाल्यो खेल्दा खेल्दै कृष्ण भगवान कता पुग्नुभएछ ? सुदामाले केही पल पर्खे तर भोक खप्न सकेनन् । त्यसैले आधा खाएर आधा कृष्णलाई पोको पारेर राखिदिए । समय धेरै बितिसक्दा पनि कृष्णको अत्तो पत्तो भएन । सुदामाले बाँकी रहेको खाजा पनि खाए । तर कृष्ण भगवान फर्केर आएनन् । उनी आफ्नो दरबारमा गएर राज गरे । कृष्णका साथी सुदामा अत्यन्त गरिब भएको हुनाले दुईका बीचमा दरार उत्पन्न भयो । भनिन्छ अर्काको भागमा लोभ गरेका हुनाले सुदामा लोभी भएका हुन् ।
रातको दस बजिसकेको थियो । कस्तुरी फ्वाँ–फ्वाँ गर्दै निदाएकी हुन्छे । उनको पिताले छोरीलाई पातलो कपडा ओडाई सजिलो गरी सुताउँछन् अनि आफू पनि मीठो निन्द्रामा हराउँछन् । बिहानको नित्य कर्म सकाएपछि कस्तुरीका पिता भान्छामा खाना अनि दिउँसोको खाजा बनाउन थाल्दछन् । छोरी उठेर बाबालाई सघाउन खोज्छे तर झनै काम बिगारिदिन्छे । नुन, मसला, बेसार भएको सन्दुकलाई एकै ठाउँमा मिसाइदिन्छे । बाबा रिसले चूर हुन्छन् अनि चर्को आवाजमा गाली गर्न थाल्दछन् । कस्तुरी सुँक्क सुँक्क गर्दै रुन थाल्छे । पलभरमै पिताको आँखा रसाउँछन् ।
छोरीलाई सुम्सुमाउँदै काखमा लिएर भन्छन्, “नानी यस्तो काम गर्न हुन्न नि ! हेर अब स्कुल जान ढिला हुन्छ ।” यति भनेर छोरीलाई काखमा राखेर खाना खुवाउँछन् अनि विद्यालयको पोसाक लगाइदिएर छोरीलाई दिउँसोको खाजा हातमा थमाइदिन्छन् । छोरी हात हल्लाउँदै विद्यालय प्रस्थान गर्छिन् । बाबा चुल्होचौको सकाएर हतार हतार गरी विद्यालयतर्फ लाग्छन् । विद्यालयको गेटमा पुग्दा पालेले गेट बन्द गरिसकेको हुन्छ । उनी एकछिन केही नबोलीकन बाहिर उभिन्छन् । राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम सकाएपछि विद्यालयका प्र.अ. गेटतर्फ आउँछन् र गेट खोल्न लगाई भुनभुनाउन थाल्छन् ।
“समयमा विद्यालय नआउने शिक्षकलाई के भन्नु ? विद्यालयको अनुशासन आफैले बुझ्नुपर्छ मनपरी चल्दैन अब ।” कस्तुरीका बाबा माफी माग्दै विद्यालय प्रवेश गर्छन् । खिन्न मन लिएर दिवाकालीन सेवामा समर्पित हुन्छन् । ४ बजेपछि घण्टी बज्छ अनि आफ्नो डेरातर्फ प्रस्थान गर्छन् कस्तुरी र उनका पिता ।
राति सुत्ने बेलामा कस्तुरीले आफ्नो पितालाई “बाबा ! भोलि कक्षामा मिसले ‘साथीको महत्त्व’ बारे पाँच पाँच वाक्य बनाउन जान्ने भएर आउने है भन्नुभएको छ । कृष्ण र सुदामा पनि असल साथी थिए नि है बाबा ! मैले हजुरले हिजो भन्नुभएको कृष्ण र सुदामाको बारेमा नै पाँच वाक्य बनाएर लिएर जान्छु । अब हिजोको बाँकी कथा सुनाउनु न त !
कृष्ण भगवान मनोरम महलमा राजा भएर राज्य सञ्चालन गरेका थिए भने सुदामा बिहे गरेर पारिवारिक भएका थिए तर बिहेपश्चात सुदामालाई हातमुख जोर्न पनि हम्मे हम्मे थियो । त्यसै बखत सुदामाकी श्रीमतीले सुदामालाई भन्छिन्, ‘तपाईंको साथी कृष्ण भगवान निकै नै धनवान, रूपवान अनि मनकारी हुनुहुन्छ रे । उहाँलाई एकपटक भेट्नुस्... केही उपाय निस्कन्छ कि ?” सुदामाले पत्नीको कुरा मनमा लिन्छन् । सुदामालाई कृष्णलाई भेट्न जान रहर जागेर आयो तर भेट्न जाँदा लाने कोसेली केही थिएन । श्रीमतीले कोसेलीको रूपमा अलिकति कनिका पोको पारेर सुदामाको हातमा राखिदिन्छिन् । सुदामा कलेठी परेका वस्त्र रगमगिएको अनुहार अनि एउटा पोकोमा कनिका लिएर श्रीकृष्णको दरबार अगाडि पुग्दछन् । तर चौकीदारले भित्र पस्न दिँदैन । “म कृष्णको मित्र सुुदामा हुँ, म उहाँलाई भेट्न आएको हुँ, यो खबर उहाँसमक्ष पु¥याइदिनुस् ।” आफ्नो बारेमा बेलिबिस्तार लगाएपछि मात्र चौकीदारले सुदामा भेट्न आएको कुरा भगवान कृष्णसमक्ष पु¥याउँछ । यस्तो खबर पाउनासाथ हर्षित हुँदै कृष्ण भगवान बाहिर आउँछन् र सुदामालाई अङ्कमाल गर्छन् । सुदामालाई अङ्कमाल गर्दै उनको हातको मायाको पोको– कनिका खोलेर मीठो मानी खान्छन् । सुदामाले सबै हालचाल सुनाउँछन् ।
कृष्ण भगवानले बडो चासोका साथ सुनिरहन्छन् । सुदामा कृष्णसँग बिदा भएर आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्छन् । उनी घर पुग्दा पहिलेको कुटी महलको रूपमा पाउँछन् । श्रीमतीले पचास ठाउँमा टालेको साडी लगाएकी थिइन् । तर त्यो साडी फेरिएको हुन्छ । यो सबै परिवर्तन देखेर पनि सुदामालाई खासै सन्तुष्टि मिलेको थिएन । सुदामा भौतिकतामा भन्दा आध्यात्मिक सुखमा आफूलाई सन्तुष्ट राख्न सक्थे । त्यसैले भौतिक सुख सयल सबै श्रीमतीले सुम्पेर देवत्व प्राप्तिका लागि गृह त्याग गर्दछन् ।
छोरी संसारमा सबै मानिस एकै प्रकारका हुँदैनन् । कोही धन दौलतलाई सर्वस्व ठान्दछन् भने कोही मनको सम्पन्नतालाई सर्वस्व ठान्दछन् । कस्तुरीका पिता आफ्नी छोरीलाई धार्मिक, नैतिकवान बनाउनका लागि यस्ता कथाहरू सुनाइरहन्थे । कस्तुरीले प्रश्न गर्छे, “बाबा, सुदामाले जस्तै मम्मीले पनि हामी सबैलाई छोडेर जानुभएको हो ?” कस्तुरीका पिता अक्क न बक्क हुन्छन् । एकछिनपछि जवाफ दिन्छन्, “छोरी, तिम्रो ममी भगवानको घर गएकी छन् । हाम्रो समीप नभए पनि हामीलाई हेरिरहेकी छिन् । कस्तुरीले जिद्दी गर्छे, “बाबा, आज कक्षामा मिसले हामीलाई जीवन र मृत्युको बारेमा कथा सुनाउनुभएको थियो । हाम्रो ममीको पनि मृत्यु भएको रे ! मेरो साथीले भनेको । कसरी भयो बाबा सुनाउनुन ।” कस्तुरीको पिताको आँखाभरी आँसु टिलपिलाउँछ । छोरीले पुनः जिद्दी गर्छे, बाबा छोरीको हठलाई नकार्न नसकी वृत्तान्त सुनाउने हिम्मत गर्दछन् ।
पेसाले तिम्रो आमा एक स्वास्थ्यकर्मी थिइन् । हाम्रो बिहेपछि धेरै समयको प्रतीक्षापछि उनी गर्भवती भइन् । हामी दुवैको खुसीको सीमा नै थिएन । उनी काम गर्न जाने समय एकैनासको हुँदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ राति पनि हुन्थ्यो । एकदिन उनी ढिला हुँदा पनि घर आइनन् । म र डेरा नजिकैको साथी भएर खोज्न गयौँ । बिडम्बना, उनलाई जङ्गलको छेउमा अचेत अवस्थामा भेट्यौँ । ढिला नगरी एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल पु¥यायौँ । स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक भएकाले पेटभित्रको बच्चा बचाउनका लागि अपरेसन गर्नुपर्ने भयो । उनको अवस्था देख्दा बलात्कार भएजस्तो देखिन्थ्यो । उनलाई अपरेसन थिएटरमा लगियो तर अफसोच उनलाई सेतो घुम्टो ओडाएर ल्याइयो । मेरो हातमा सानो अबोध चेलीलाई सुम्पियो । केही समयमा नै बच्चीको स्वास्थ्यमा पनि असर परेको हुनाले आइसीयूमा राख्नुपर्ने भयो । ती नानी तिमी नै थियौ । एकछिनपछि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आयो । रिपोर्टले बलात्कार भएको पुष्टि ग¥यो । म अतालिएको थिएँ । गर्भभित्रै तिम्रो बलात्कार भएको रहेछ । पिपासु पुरुषबाट गर्भभित्र त चेली सुरक्षित रहन सकेकी छैनन् अनि बाहिर उसैको हैकम चलेको बस्तीमा तिमीलाई कसरी सुरक्षित रहन देला ? तर तिम्रो सुरक्षा गर्ने जिम्मा अब मेरो थियो । मैले मनमनै बाचा गरेको थिएँ । तिमीलाई यस्तो घटनाबाट टाढा राख्नेछु । छोरी सुक्क सुक्क गरी रुन्छे ।
कस्तुरीका आमाले अझै न्याय पाएकी छैनन् । अपराधीको खोजतलास भएको हो वा खोजतलास गरिएको जस्तै देखाइएको वा टिमलिएको हो ? यो संसार विचित्रको छ । कोही नारीलाई पूजा गर्छन् । कोही उनैको जिन्दगीसँग खेलेर नारकीय बनाइदिन्छन् । सबै पुरुषहरू एकै प्रकारका त हुँदैनन् । कोही कस्तुरीका पिता जस्तै आदर्श, नैतिक, कर्तव्यबोध, निष्ठा अनि सदाचारी पनि हुन्छन् । आदर्श पिता ती हुन् जसले सिङ्गो धर्तीलाई ओत लगाएर उनको ओजनलाई काँधमा राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने तागत भएका हुन्छन् । आमा समुन्द्र हुन् भने पिता समुन्द्रको छाललाई पनि सही मार्गमा हिँडाउने किनारा हुन् र धर्तीको हरेक स्वरूपलाई स्वीकार्दै मुस्कुराएर आफ्नो काँध थाप्ने शक्ति भएको व्यक्ति नै पिता हुन् । यस्ता आदर्श पिताहरूको साथ पाउने भाग्यमानीहरू कमै छन् ।
हाम्रो देश नेपाल हजारौँ चेलीहरूको आँसुले निथ्रुक्क भिजेको छ । दिनहुँ बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन् । नारी, नारित्व र नारी अधिकारको नारा घन्काउनेहरू पनि सत्य, तथ्य उजागर गर्नको लागि ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । हजारौँ निर्मलाहरूलाई रावणको कुकर्मबाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि यो युगमा सत्यवादी रामको आवश्यकता छ । अरू कुरा त छोडौँ न, कोरोना लागेर मृत्यु र जीवनसँग क्वारेन्टाइनमा सिँगौरी खेल्दै गरेका चेलीहरूमाथि पनि बलात्कार भएको छ । म अनभिज्ञ छु, नारीको सुरक्षा कसले गर्ला ? छाडिएका छैनन्, दुई वर्षका बालिकाहरू, गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, अपाङ्ग र दृष्टिविहीन पनि । कति त आफ्नो अधिकारका लागि लडेका छन् । कति आफ्नै इज्जत जाने त्रासले दमित भएर बसेका छन् । कोही यही केसले आत्महत्या गरेका छन् त कतिलाई प्रयोग गरी निर्ममताका साथ बीभत्स हत्या गरिएको छ । आखिर यस्तो अत्याचार कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो । कानुनमा मृत्युदण्डको प्रावधान राखियो भने पनि पुरुषको अन्तष्करणमा आत्मज्ञान नभएसम्म कुनै चेली सुरक्षित रहन सक्दिनन् ।
पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषको साथ चाहिन्छ । यो सत्य कुरा हो । त्यसैले सम्पूर्ण परम पिता परमेश्वरलाई बिन्ती गरी आमारूपी देवी नारीलाई बलात्कारको चित्कारबाट उन्मुक्ति दिने कामको प्रादुर्भाव आदर्श पिता बनेर तपाईंहरूबाट नै होस् भनी अभिव्यञ्जनाहरूलाई यो लेखमा उजागर गरिएको छ । भोलिका दिनमा आदर्श पिता कहलिने सपना हरेक पुरुषहरूको मनमा सजिएदेखि कुनै चेली पनि गर्भमा बलात्कृत हुनुपर्ने थिएन । तपाईं कस्तो पिता कहलिने, तपाईंको हातमा छ ।
कर्णालीमा जनार्दन शर्मामाथि रणनीतिक आक्रमण
इरानमा कोरोनाभाइरसका संक्रमित बढे
धारिलो हतियार प्रहार गरी २० वर्षीय युवाको हत्या
बैंकिङ कसुरका दुई मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार प्रसाई पक्राउ
विवादका बीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ब्यारेट नियुक्त
भारतले क्षेप्यास्त्र हमलाका लागि विशेष अमेरिकी डेटा प्रयोग गर्न सक्ने